विहेको केहि दिन अघि प्रेमीका गुमाएका प्रकाशले भ्यालेनटाईन डे को दिन ३ करोड नेपालीलाई रुवाउने के गरे यस्तो ? रोकिएन कसैको आँसु … «
विहेको केहि दिन अघि प्रेमीका गुमाएका प्रकाशले भ्यालेनटाईन डे को दिन ३ करोड नेपालीलाई रुवाउने के गरे यस्तो ? रोकिएन कसैको आँसु …
Published : 15 February, 2020 12:12 pm
माघ १० गते दुर्घटनामा परेर निधन भएकी रमिलाकाे श्रीमान प्रकाश यतिबेला वियाेगमा छन् । आज अन्य जाेडीले प्रेम दिवस मनाईरहदा उनले आफ्नाे जाेडी नबने पनि अरु जाेडीलाई शुभकामना दिएका छन् । हेराै उनकाे मार्मिक स्टाटस :
सात जनमको माया तिमीलाई बुढी सायद तेरो खुशी यो पापी दुनियाँले हेर्न सकेन है । तर यो जुनिमा मात्रै होइन फुच्ची सातै जनमसम्म तिमीलाई माया गरिरहन्छु यो मुटुमा त मात्र छस् । तेरो ठाउँ कसैले पाउने छैन बुढी । छाडेर गइस है । धेरै दिन भयो वेवी तिम्रो फोन र एसएमएस आएको छैन कसैको कल वा एसएमएस आएपनि आत्तिएर झट्ट हेर्छु कि तिमीले एसएमएस गरेउ कि भने ।
मेरो आँखामा मेरो आत्मामा बसेको छउ तिम्रो मायाको कदर गर्ने छुँ । सँधै बुढी दुनियाको सबै प्रेमीहरुलाई तिम्रो जस्तै माया गरुन यो मायाको अस्तित्व राखुन् । आइ लभ यू फरइभर मेरो मुटु मिस ग ब्याड्ली । ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे मेरो फूच्ची ।